Qareen Ayaad U Baahantahay | Advokatsentralen.no
Qareen Ayaad U Baahantahay
Inkastoo laba jeerba aanay dadka badankoodu ka fikirin muhiimadda uu dhakhtarka qoysku leeyahay ama in si joogto ah lala xidhiidho qof gacanku haye ah, dadka qaar waxay u haystaan sidoo kale in Qareenku yahay astaan u taagan wax khaldan. Ama waxaad raadineysaa dhibaato ama waxaad ku sugan tahay xaalad aad u khatar badan oo laga yaabo inay iyaga uga dhigaan inay sharci yihiin.
Taa baddalkeeda, waxaa jira faa’iidooyin balaadhan oo ka imanaya shaqaalaysiinta qareen waxaanan u kala qayb qaadan doonaa qormadan;
Ha u malayn in waajibaadka qareenku uu ku xadidan yahay uun hagaajinta dhibaatooyinka, ama sixida iyo dhexdhexaadin.
Garyaqaanadu waxay hubiyaan inay matalaan danaha macaamiishooda iyo in sida ugu wanaagsan loogu adeego iyagoo ka ilaalinaaya dhibaato sharci xitaa ka hor inta aysan bilaabin wax kasta oo dhibaato uga iman karto iyagoo dib u eegaaya heshiisadda iyo in ay jiraan xeerar hore u qornaa wax iyo sidoo kale xereynta waraaqaha ama hubinta in macaamiishooda ay adeecaan sharciga
Shaqaaleysiinta qof qareen ah sidoo kale u akhriya cabashooyinka sharciga ah ee la xidhiidha heshiisayada ganacsigaaga ama waxkasta oo naftaadu sharci ku heli karto, waana hab dheer oo lagaga hortegaayo dhibaatooyinka sharciga, taas oo kaa bed baadinaysa lacag badan oo kaa luntay iyo madax xanuun kugu dhaca.
Ma noqon doontid inaad la yaabto inaad ogaato in sababaha aasaasiga ah ee dadku go’aansadeen inaadan la xiriirin qareen ay tahay. Dadka qaar waxay moodayaan inaysan waligood awoodi doonin inay qareen awoodaan, iyagoo hilmaamay inuu jiro heshiis ku saabsan dacwadaha qareenka. In kasta oo qaar si macquul ah u dacweeyay macmiisha, qaar ka mid ah “Qareenada T.V-yadu” way ku adkaan karaan boorsadaada. Laakiin markaa, ma jirto wax khatar ah oo ku lug leh la hadalka qareenka.
Tartamayaashaada waxay leeyihiin qareen. Waa inaad saxiixdid dukumiintiyada qaar marka aad u shaqeyneyso ama shirkad leedahay, ha u qaadanin inay iyagu qoraan dukumiintiyada. Maalmaha ma jiraan cid wax ka qabata dib-u-celinta sharciga. Waqtigu wuu is beddelay qof walbana si sharci ah ayuu ula macaamilaa. Ma aha oo kaliya inaad si yar u fahmi doonto haddii aad la macaamilayso qof aad wada leedihiin qareen, laakiin sidoo kale waxaad tahay khatar weyn. Waa in aad Kiraysato qareen kuu diyaarin doona dukumintigaaga iyo danta aad ka leedahay.
Sideed uga jawaabi laheyd haddii dacwaddu ay wakhti xaddidan leedahay? Weligaa ma ogaan doontid waxa dhici kara waxaana xigta in aad albaabkaaga u soo lugeyso adigoo aan lahayn xirfadle sharci kaaso ilaaliya arrimahaaga. Waa muhiim in xiriir xiriir lala sameeyo qareen hadda!
Khadka hoose; waxaan ku noolaan jirnay goob ay tahay inaad xasaasiyad ka qaaddo tallaabada sharci ee maalin kasta socota.